Home adolescence အမေနဲ့ သမီးအကြား သံယောဇဉ်ပိုမို ခိုင်မြဲစေဖို့ အတူတူလုပ်နိုင်မယ့် ချစ်စရာလုပ်ဆောင်ချက်လေးများ
မိခင်နှင့် သမီးဖြစ်သူအကြားက သံယောဇဉ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်သက်တာမှာ မရှိမဖြစ်အရေးကြီးဆုံးသော ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာ သမီးမိန်းကလေးတွေ အပျိုဖော်ဝင်လာပြီဆိုရင် မိခင်နဲ့ သမီးကြားက ဆက်ဆံရေးတွေက သဘောထားကွဲလွဲမှုလေးတွေဖြစ်လာပါတယ်။ မိခင်တွေကလည်း သမီးတွေအရွယ်ရောက်လာနဲ့အမျှ ဆက်ဆံရေးတွေပြောင်းလဲလာမှာကို စိုးရိမ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် သမီးအကြားက သံယောဇဉ်တွေ ပိုမိုခိုင်မာလာစေဖို့ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ကလေးစိတ်ဝင်စားမယ့်အရာလေးတွေကို အတူလုပ်ပေးပါ
ကလေးတွေမှာ တစ်မူထူးခြားပြီး စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ဝါသနာများစွာရှိကြပြီး အများစုကတော့ အရာအားလုံးကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ဒီတော့ သူတို့အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားမယ့်အရာတစ်ခုခုကို ဖော်ထုတ်ပြီး သူတို့နဲ့ အတူလုပ်ပေးပါ။ ဥပမာ — စကိတ်စီးတာမျိုး၊ သရုပ်ဆောင်တာမျိုး၊ သီချင်းဆိုတာ၊ တူရိယာတစ်ခုခုတီးတာ၊ စာသင်တာ၊ ဆေးကုတာ စသဖြင့် သူတို့စိတ်ဝင်စားရာတစ်ခုခုကို အတူလုပ်ပေးပါ။
ကလေးမှာလည်း ပျော်ရွင်ဖွယ် တန်ဖိုးရှိသော အမှတ်တရတွေကို ရရှိသွားပါလိမ့်မယ်။
၂။ ရူးကြောင်ကြောင်မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ ဂိမ်းဆော့ပါ
မေးခွန်းတွေဟာ လူအများအတွက် နှစ်သက်ပျော်ရွှင်စရာလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Truth ( or) Dare? လိုမျိုး ဂိမ်းလေးတွေကစားကြည့်ပါ။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားကို သိဖို့ စိတ်ကူးယဉ်နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းရခြင်းအတွက် နောက်ထပ်ဆုလဒ်တစ်ခုပါ။ အမှန်တော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ ဘာရှိတယ်ဆိုတာ မသိဘူးဆိုရင် အဲဒီ့လူရဲ့ နှလုံးသားနဲ့ အမှန်တကယ်ရင်းနှီးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဥပမာ – “ကမ္ဘာပေါ်က တစ်ယောက်ယောက် တစ်နေ့ သမီးရဲ့ ကျောင်းမှာ ဆရာဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် သမီးကမ္ဘာပေါ်က ဘယ်သူ့ကို သမီးတို့ရဲ့ ဆရာဖြစ်စေချင်လဲ?”
“ဒီလောကရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ပြောင်းလဲနိုင်ရင် သမီးဘယ်အရာကို ပြောင်းလဲမှာလဲ”
၃။ စာအုပ်အတူ ဖတ်ကြမယ်
သမီးဖြစ်သူက စာဖတ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တောင် ကလေးတိုင်းက ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ သမီးဖြစ်သူနဲ့ စာအုပ်အတူတူဖတ်ရတာက ပျော်စရာကောင်းတဲ့အမှတ်တရတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ စွန့်စားမှုတွေတိုင်း အတူတူစိတ်လှုပ်ရှားပြီး စာမျက်နှာတွေကို အလှည့်ကျဖတ်ရှုရင်း စာအုပ်အကြောင်းဆွေးနွေးရတာကလည်း ပျော်စရာကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် သမီးဖြစ်သူနှင့် မိခင်အကြားမှာ သံယောဇဉ်တွေကို ပိုလာစေချင်တယ်ဆိုရင် စာအုပ်အတူဖတ်ပါ။
၄။ အမေ ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး မေးပါ
ဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ သမီးဖြစ်သူ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ တကယ်အရေးကြီးပြီး ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုနှစ်ဦးအကြား အင်မတန်နွေးထွေးစေပြီး သံယောဇဉ်ခိုင်မာစေတဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူမကို ဘယ်လောက်သဘောကျကြောင်း ပြောပြပါ။ သမီးဖြစ်သူ အလုပ်တွေရှုပ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီအတိုင်း ရိုးရိုးကူညီဖေးမချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုပြောပေးပါ။ “သမီးရဲ့ ပုံမှန်အလုပ်တွေကို သမီးကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲနေပုံပါပဲ။ ကောင်းကောင်းလည်း ကိုင်တွယ်နေတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အမေ သမီးကို ကူညီပေးနိုင်တာ တစ်ခုခုလိုအပ်ရင်ပြောပါ၊ တစ်ခုခုကူညီပေးရမလား?”လို့ ပြောပေးပါ။
Previous articleကလေးတွေ အစာစားတဲ့အခါ ညစ်ပတ်ပေပွခွင့် ပေးသင့်တာ ဘာကြောင့်လဲ?
Next articleလူကြီးတွေနဲ့ ကလေးတွေမှာ Screen Time ဘယ်လောက်ဆို အဆင်ပြေလဲ?
သင့်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သော နည်းဗျူဟာ ၄ ခု